Meere astaamo dhulka la mid ah leh oo la ogaaday
Daraasadooda ayey ku ogaadeen in meerahaas uu ku gadaaman yahay dahaar ka samaysan gaasas noqon kara inay yihiin uumi ama maaddada Methane, ama labadaba, waxaana lagu soo bandhigay majalladda the Astronomical Journal.
Saynisyahanno ayaa sheegaya in joogteynta qallinka dumarka lagu sameeyo marka ay dhalayaan ay cawaaqib ku yeelanayso horumarka uu jirka bani aadmigu sameeyo.
Maqal Abwaan Maxamed Jaamac Kayd oo geeriyooday
Magaalada Hargaysa waxaa maanta ku geeriyooday Maxamad Jaamac Kayd, oo ka mid ahaa abwaanada ku caanka ah hal-abuurka iyo allifaada heesaha.
Abwaan Maxamed Jaamac Kayd oo geeriyooday
Maqal Dowladda Masar oo iskuulo furaysa
Ergo waxbarasho oo ka socda dowladda Masar ayaa wajiga koowaad ka hawlgali doona labada iskuul ee Sheikh Xasan Barsame iyo 15 May oo ay dawladda Soomaaliya ku wareejisay.
Dowladda Masar oo iskuulo furaysa
Dowladda UK ayaa ogaan doonta websiteyada ay dadka booqdaan
Shirkadaha Internetka ayaa qorshaynaya inay macaamiisha UK siiyaan hab ka hortaga sharci cusub oo lagu ogaanayo websiteyada ay booqdeen.
Jaamacada Oxford oo bixinaysa waxbarasho lacag la'aan ah ee 'Mooc'
Jaamacada Oxford ayaa ku dhawaaqday koorsooyinkii ugu horeeyay ee internetka oo loo soo gaabiyo Mooc - "massive open online course" inay heli karaan ardayda meel walba oo ay joogaan.
'2016 ayay u badan tahay inuu noqdo sanadkii ugu kululaa'
Hayadda Qaramada Midoobay ee qaabilsan isbadalka cimilada ee WMO, ayaa sheegtay in 2016 ay u badan tahay inuu noqdo sanadka ugu kulul tan iyo intii diiwaan galinta ay bilaabatay, sida ay sheegtay xogtii ugu horaysay.
Cudurka Dementia ayaa noqday dilaaga ugu badan ee England iyo Wales
Cudurka Dementia, oo uu ku jiro cudurka Alzheimer, ayaa hadda ah dilaaga ugu horeeya ee gobolada England iyo Wales ee Britain
Waddamada khaliijka oo iska kaashanaya la dagaalanka argagixisada
Waddamada Khaliijka ayaa samaynaya tababaro looga hortagayo argagixisada iskaashi dhinaca ammaanka oo ka dhacay Baxrain
Britain oo doonaysa in la siiyo gargaar waxtar leh waddamada
Xoghayaha horumarinta caalimiga ee Britain ayaa ku baaqday gargaar waxtar leh in lagu bixiyo lacagta Britain iyadoo goor dhow la daabacayo warbixin shaqada hayadaha gargaarka
Teknoolajiyada iyo dhismaha : Wax dhisida oo aad u noqonaysa digital
Howlaha dhismaha ayaan lagu aqoon jirin hal abuurka digitalka, laakiin barnaamijyada kombuterada ee naqshada iyo maamulka mashaariicda ayaa badalaya fikradii laga qabay.
California: Jaamacad la furay oo macallimiin la'aan wax dhigaysa
Jaamacad lagu barto borogaraamyada kombuterka oo macallimiin la'aan wax dhigaysa ayaa laga California.
Inaaad aadid jaamacad ayaa mar walba loo arkaa inay tahay guusha ugu saraysa ee cilmiga iyo jidka ay maraan dhalinyarada, laakiin dadka qaar ayaa ka leexanaya caadadan oo qaadanaya waxbarasho ka duwan.
QM: Wax beerashada ayaa dhimi karaa kaarboonka
Wax beerashada caalamka ayaa kaalin wayn ka qadan karta dhimista kaarboonka hawada gala iyo la qabsiga isbadalka cimilada ayay sheegtay Qaramada Midoobay.
QM: Wax beerashada ayaa u baahan dhimista kaarboonka
Iskuulka ku yaala Hindiya oo siiya waxbarasho aad u saraysa ardayda saboolka ah ayaa hela 250,000 codsi isagoo qaada 200 arday.
Muuqaal Daawo: 13 jir xaas iyo arday ah
Xaliimo waa gabar 13 jir oo ku nool duleedka Wajir. Waa xaas waxna way barataa. Waxay hadda dhiiragelisaa gabdhaha faceeda ah oo waliba waxay ku hamineysaa in ay noqoto macallin mustaqbalka.
Maqal Taariikhda maalinta Cashuura ee dhimashadii Imaam Xuseen
Magaalada Karbala ee Ciraaq waxaa isugu soo baxay kumanaan Shiica ah oo ilmeynaya oo xabadka iska garaacaya iyagoo xusaya maalinta Cashuura.
Taariikhda maalinta Cashuura ee dhimashadii Imaam Xuseen
Ma sahlana in dumarka Morocco ay jidka maraan iyadoon la aflagaadayn, Morgan Meaker ayaa dhagaystay dadka doonaya inay joojiyaan cudurkan xadgudubka.
Xul Soomaalida geerida u bareera si ay u guursadaan
Kafeega oo qatar ku jira
Shirka isku daalnaye maxaa inoo dan ah oo maalintii labaad galay
Diyaarad ku dagtay Sydney ka dib markii uu matoorkeedii duleeshamay